I-Reolink Argus 3, ikhamera yokuqapha ephelele ngokuphelele | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 28/05/2021 10:00 | General
Ifemu yase-Asia Reolink Sekuyiminyaka eminingi isebenza ngale khamera ehlakaniphile yokuphepha ekhaya nanoma yiluphi olunye uhlobo lomqondo oluza engqondweni. Ukukhululwa kwakhe kwakamuva bekungeke kuphuthelwe kuwebhusayithi yethu, lapho sihlala sikugcina usesikhathini ngolwazi olumayelana nekhaya elixhunyiwe.
Thola nathi wonke amandla alo, ubuhle bawo futhi nobubi bawo. Ungaphuthelwa yilokhu kuhlaziywa okujulile ngokuningiliziwe.
3 Phinda uvule uhlelo lokusebenza nezilungiselelo
UReolink uthathe isinqumo sokubheja ngokuqhubeka kwalo mkhiqizo. Yize inezinto ezintsha ezibalulekile maqondana ne-Argus 2 esibuye siyihlaziye lapha, iqiniso ukuthi ifemu inomklamo obonakalayo kuyo yonke imikhiqizo yayo. Ngalesi sikhathi sinedivayisi enengxenye engaphambili eyisicaba enengubo emnyama, kanti ingemuva icwecwe kakhulu kupulasitiki omhlophe ocwebezelayo. lapho singabona khona uphawu lwenkampani. Ngasemuva, indawo enozibuthe ezosisiza ukuyibeka ekusekeleni kwayo okuhlukahlukene esizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi.
Izilinganiso: 62 x 90 x 115 mm
Ngaphambili lapho kukhona ama-LED, zonke izinzwa nobuchwepheshe obuzinikele ekuthatheni isithombe. Ngemuva kulapho sinetheku le-microUSB elisebenzela ukunikezwa kwamandla, isisekelo sokufaka kanye nesipika esifundisayo. Futhi sinenkinobho "yokusetha kabusha" phansi kanye nenkinobho yokuvula / ukuvala kanye nechweba lekhadi le-microSD esingafinyelela kulo ngesoftware.
Isundu, njengoba sishilo, sithathwa yi-adaptha enemagnethi ezosivumela ukuthi sibeke ikhamera ezinhlangothini eziningi ngaphandle komzamo omkhulu.
Inzwa ye-Starlight CMOS unesibopho sokuthwebula isithombe, esikwazi ukunikeza isinqumo se- I-1080p FHD enesilinganiso, yebo, sama-FPS ayi-15 kuphela. Ifomethi yevidiyo eqoshiwe izoba yendawo yonke futhi iyahambisana, H.264.
Kulokhu ikhamera ine-engeli yokubuka engu-120º futhi isebenzisa uhlelo oluyinkimbinkimbi kakhulu lombono wasebusuku kokumnyama nokumhlophe ngama-infrared LEDs ayisithupha anekhono lokubona okungafika kumamitha ayi-10, kanye nohlelo lombono ebusuku ama-LED angama-230 lm anethoni ka-6500 K lokho kuzophinde kusinikeze okuqukethwe kuze kube ngamamitha ayi-10.
Sinezikhulisi zokusondeza ezidijithali ngokugcwele eziyisithupha ngokusebenzisa uhlelo olusetshenzisiwe. Ngokwengxenye yayo, inayo umbhobho nesipikha lokho kuzosivumela ukuthi sibe nomsindo kuzindlela zombili futhi siwusebenzise njenge-intercom. Ngokwengxenye yayo, inohlelo lokuthola ukunyakaza oluguquguqukayo lwe- "PIR" olunebanga elifinyelela kumamitha ayi-10 nge-engeli engu-100º.
Inokuxhumeka kwe-WiFi okusebenza kumanethiwekhi we-2,4 GHz ngokuphepha kwe-WPA2-PSK. Ezingeni lobuchwepheshe kanye ne-hardware kuphela, lokhu cishe yikho konke esikushoyo ngale khamera, okuqanjwe kabusha ngayo maqondana nemodeli yangaphambilini kunalokho kuyindlala, kepha kwanele ukuhlala kungumkhiqizo okhangayo. Okokugcina, le khamera ihambisana ngokuphelele nekhaya elixhunyiwe le- Umsizi weGoogle.
Phinda uvule uhlelo lokusebenza nezilungiselelo
Uhlelo lokusebenza lweReolink lusebenze kahle kakhulu futhi lunikeza i-interface enhle yomsebenzisi nokusebenza okuhle kuzo zombili i-iOS ne-Android, okungenani ezivivinyweni esikwazile ukuzenza:
Uhlelo lokusebenza luzosivumela ukuthi sixhume ngqo kukhamera bukhoma, nge-WiFi nangedatha yeselula. Ngaleyo ndlela singakwazi ukulungisa wonke amandla futhi sibuke namavidiyo agcinwe kwimemori khadi. Phakathi kokunye, lawa ngamakhono athakazelisayo kakhulu wohlelo lokusebenza:
Yenza kusebenze isistimu yokuthola ukunyakaza ebangela ikhamera kuphela uma iyithola
Finyelela bukhoma futhi uqondise kokubili umsindo nevidiyo yalokho okwenzekayo
Xhumana nesipikha ngomsindo esiwukhipha kuselula
Isaziso sezaziso zokunyakaza
Ukugcinwa kwemizuzwana engu-30 edlule lapho weqa isaziso
Isexwayiso sebhethri esiphansi
Shintsha ukurekhoda, ukuvula nokuvala
Ngeshwa kuzodingeka sibhekane nesicelo salo sanoma yiluphi uhlobo lwabaphathi ebusweni bekhamera yevidiyo, Ngaphandle kwalokhu, gcizelela ukwakheka okuhle nesoftware elungiselelwe enayo.
Le Argus 3 evela kwaReolink iyisinyathelo esiya phambili ngokwenza ikhamera icwebe kakhudlwana, isinikeze ithuba lokukhetha iphaneli elanga elizogcina idivayisi isebenza njalo, kungakhathalekile ukuthi ibhethri layo lifakiwe. Ngaphandle kokungabaza, enye indlela ethakazelisa kakhulu ebangeni leReolink yemikhiqizo ekhula kancane kancane., ungayithola ku-Amazon kusuka ku-126 euros.
Kuthunyelwe ku: May 28 we-2021
Ayikho iseva ehlanganisiwe
Ukuntuleka kwama-FPS amaningi
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Reolink Argus 3, ikhamera ephelele yokuqapha